January 15, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Man United oo u soo baxday wareega afaraad ee koobka FA Cup, kaddib markii ay ka reebtay Wolverhampton… +SAWIRRO
Cayaaraha January 15, 2020
(Manchester) 16 Jan 2020. Manchester United ayaa u soo baxday wareega afaraad ee koobka FA Cup, kaddib markii ay ka reebtay kooxda Wolverhampton oo ay kaga adkaatay 1-0, xilli kulankan uu ahaa kulan ku celis ah wareega saddexaad ee tartankan, kaddib markii kulankii lugta hore ay ku soo kala baxeen bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta hore ee […]Sii akhriso
Sirta guusha Cristiano Ronaldo, Sababta uu Lix jeer Cuntada u cuno, saacadahiisa hurdada iyo siro kale oo laaab leh
(Turin) 15 Jan 2020. Cristiano Ronaldo waa mid kamid ah xiddigaha Ugu sumcadda badan Kubadda Cristiano waxaana hadda la kashifay sir Noloshiisa la xiriiirta. Sirta la ka shifay waxaa ka mid ah cnuucyadda cuntada uu isticmaalo iyo sababta uu 6 jeer cuntadda u cuno 24 saac iyo saacadihiisa hurdadda iyo xogo kale oo la yaab leh. […]Sii akhriso
Eric Abidal oo shaaca ka qaaday sababta ay Quique Setien ugu doorteen shaqada tababarka ee Barcelona
(Barcelona) 15 Jan 2020. Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday habeenkii Isniinta in ay shaqada ka cayrisay Tababare Ernesto Valverde, isla markaana waxa ay magacaabatay macallin cusub. Kooxda reer Catalonia ayaa waxa ay bedelka Tababare Ernesto Valverde u magacaabatay macallinkii hore ee kooxda Real Betis ee Quique Setien. Haddaba Eric Abidal oo ah agaasimaha Sii akhriso
Liverpool oo xiddigo ay u soo laabteen kuwo kalena ay ka maqan yihiin kahor kulanka Manchester United
(Liverpool) 15 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool uu hoggaaminayo tabbaare Jürgen Klopp ayaa halkooda ka sii waday isu diyaarinta kulanka soo socda ay Axada kula ciyaari doonaan Manchester United garoonka Anfield, kaasoo ka tirsan horyaalka Premier League. Liverpool ayaa maanta sameeyay tababar labo xilli ah si ay ugu diyaar garowdo kulanka Manchester United, Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Man United Iyo Wolverhampton ee tartanka FA Cup
(Manchester) 15 Jan 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Manchester United Iyo Wolverhampton kulanka goor dhow soo gali doona ee tartanka FA Cup. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Manchester United Iyo Wolverhampton: Man United XI: Wolverhampton XI: Gool FM.Sii akhriso
Madaxda W/Gaashaandhigga XFS oo ka tacsiyadeeyay geerida agaasime ka tirsanaa wasaaradda
Soomaaliya January 15, 2020
Madaxda W/Gaashaandhigga oo ka tacsiyadeeyay geerida agaasime ka tirsanaa wasaaradda
Somali News January 15, 2020
RASMI: Kooxda Chelsea oo fasaxday mid ka mid ah xiddigaheeda
(London) 15 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea oo ka dhisan Galbeedka Magaalada London ayaa fasaxday mid ka mid ah xiddigaheeda. Da’yarka Cheslea ee Conor Gallagher ayaa ugu biiray kooxda Swansea qaab amaah ah isagoo u ciyaari doona inta ka dhiman xilli ciyaaredkan. 19 sano jiran ayaa waqtigiisii kooxda Charlton Athletic ee xilli ciyaareedkan 2019-2020 waxa […]Sii akhriso
Xaalad cusub oo ka soo baxeysa wararka Olivier Giroud la xiriirinaya kooxda Inter
(Milan) 15 Jan 2020. Wararka ka imaanaya gudaha dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in kooxaha Inter Milan iyo Chelsea ay heshiis ka gaaren Olivier Giroud sida lagu daabacay wargeyska “Sport Mediaset”. Labadan kooxood ayaa ku heshiiyay lacag dhan €4.5 million oo lagu daray lacago guno ah oo uu helayo 33-jirka France, kaas oo la rajeynayo in toddobaadkan […]Sii akhriso
Man United oo qorsheyneysa in ay soo qaadato xiddig ka tirsan kooxda Atletico Madrid
(Manchester) 15 Jan 2020. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso soo qaadashada xidig ka tirsan kooxda reer Spain ee Atletico Madrid. Red Devils ayaa lagu soo waramayaa in qaab amaah ah ay ku dooneyso Marcos Llorente, maadama ay jirto dhibaato dhaawacyo ah ee dhaanka qadkeeda dhexe, sida uu sheegay wargeyka ” Manchester Evening News” […]Sii akhriso